Xildhibaanno ka walaacsan ka run sheegista Xukumadda ee Miisaaniyadda 2019-ka – Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka ayaa su’aalo gelinaya sababta aysan Miisaaniyadda 2019-ka, oo maanta lagu wado in la meel mariyo, ugu dhex caddeyn daqli ay ahayd iney Wasaaraddu hesho ama loogu dhex sheegay War-bixinta Miisaaniyadda in daqligaasi yaraaday iyo habka qarash-bixinta Miisaaniyadda ee meelaha qaar. Xildhibaanada qaar ayaa muujinaya iney shaki qabaan iney dowladdu qarash-gareyn doonto Miisaaniyadda ay soo qortay.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa weydiiyey Wasaaradda Maaliyadda sababta ay Miisaaniyadaha Dowladda uga dhex muuqan la’dahay in Xildhibaannada loogu soo daro qarashka ku baxaya marka ay dib ugu laabanayaan deegaan-doorashadooda.
“Golaha Shacabka waxaa saaran waajibaad ah degaan-doorasho; maxaa miisaaniyadda loogu dari waayay dhaqaale u fududeeyo deegaan-doorashadooda” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow. “Waxaa isla fadhiya Wasiir Kuxigeen qaata todoba kun oo Doolar iyo Xildhibaan aan haysan dhaqaale uu ku tago degaan doorashadiisa” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Xildhibaanka ayaa isweydiiyey, in haddii uu xaalku yahay sidaas uu u dhigay, sida lagu gaari karo “Xasilooni Siyaasadeed”. Waxaa kale oo uu dood ka qabaa mashaariicda ay xukumaddu markasta ku soo darto Miisaaniyadda, oo sida uu sheegay aan la arkin meel lagu qabtay. “Mashaariic ayaa markasta lagu soo qoraa misaaniyadda, meel ceel laga qodayna uma jeedno, marka waxaan u fahmaynaa in lagu dhuunto, oo fara dhuuq dhuuq yar laga helo” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.
Miisaaniyaddaan ayaa inta aan la ansixin maanta waxay Xildhibaannada qaar doonayaan iney jawaab u helaan halka ay ku dambeysay lacag ay sheegeen iney si sharci darra ah uga baxday Bangiga Dhexe. “Guddoomiyaha Bangiga lacagtii ay Golaha Shacabka ka hor sheegtay ee sida sharci-darada ah uu u qaatay Wasiirka Maaliyadda, waxaan rabnaa in la daba raaco waxii ka haray” ayuu yiri Xildhibaan Sakariye Gaashaan.
Waxyaabaha ku qoran Miisaaniyadda ay Xukumaddu ku shaqeyn doonta 2019-ka waxaa ka mid ah mushaar loo qoondeeyo Ciidanka NISA, oo sida ay qabaan Xildhibaannada qaar la kala diray. “Ciidanka NISA waa la kala diray oo sanad wax mushaar ah lama siin, haddana waxaa u qoran miisaaniyad. Marka, waa in la caddeeyaa” ayuu shalay Xildhibaan Gaashaan ka hor yiri Goalaha Shacabka.
Xildhibaan Axmed Xaaji Taaw ayaa isaguna isweydiinaya waxa sababay in la waayo caanshuurtii ay ahayd in ay qaaddo Xukumadda sanadkan tagaya, sida uu hadalka u dhigay. “waxaan soojeedinayaa in la bidhaamiyo waxa sababay in la waayo Canshuurtii Biyaha Sifaysan iyo Cabitaannada, iyo waxa hoos u dhigay Canshuurtii Qaadka” ayuu yiri Xildhibaan Taaw.
Xildhibaan Cismaan Xaaji ayaa soo hadal qaaday waxa ay Miisaaniyadda 2019-ka u qoondeysay Dowlad Goboleedyada. “Waxaa loo qoondeeyay Dowlad Goboleedyada lacag ka duwan tii hore sida Somaliland, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabelle iyo Koofur Galbeed; lacagtaas oo kala badan. Marka, waxay u baahan tahay sharaxaad dheeraad ah” ayuu yiri Xildhibaan Cusmaan.
Guddiga Difaaca Golaha Shacabka oo codsaday in Kalfadhiga 4-aad lagu meel mariyo Xeerka Ciidanka